Wararka – Page 30 – Radio Simba 95.0 MHZ – Simbanews – Idaacada Simba
Khayre: Waxaan U Mahad Celinayaa Dhaqaatiirta Go’aansaday Inay Safka Hore Ka Galaan Dagaal Lamid Ah Kan Xabbadda La’isu Dhigo
Gudoomiye Mursal oo Sheegay in Doorashadda Waqtigeeda Ku Dhacayso
Gudoomiyaha Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Shiikh C/raxmaan ayaa ka hadlay wararka ku aadan in dowladda haatan jirta muddo kordhin ay sameysan doonto. Waxa uu sheegay in wararkaas ay yihiin,kuwa been abuur ah,islamarkaana muddo kordhin aysan jiri doonin. “Waxaan rabaa in hal qodob si fiican loo fahmo. Sharcigan doorashada waxaa loogu talagalay baarlamaanka, oo kala ah Golaha Shacabka iyo Golaha ...
Bukaankii u Horreeyay ee Looga Shakisanyahay Covid-19 oo Puntland ku geeriyooday
Puntland ayaa shaacisay in bukaan looga shakisanaa xanuunka COVID-19 oo karantiilnaa uu geeriyooday balse weli la sugayo natiijada baaritaan lagu sameeyay si loo xaqiijiyo in uu cudurkaas u dhintay iyo in kale. Qoraal ka soo baxay Guddiga ka hortagga iyo wacyi-gelinta xanuunka COVID-19 u qaabilsan Puntland ayaa lagu sheegay in bukaankaas geeriyooday weli la sugayo natiijada baaritaankiisa balse lama sheegin ...
DFS oo Ganacsatada Ugu Baaqday Inay Safka Hore Ka Galaan Qorshaha COVID-19
Wasiirka ganacsiga iyo warshadaha Xukuumadda federaalka Soomaaliya, Eng. Cabdullaahi Cali Xasan, ayaa ganacsatada Soomaaliyeed ugu baaqay in hantidooda ay uga qayb qaataan qorshaha xakameynta COVID-19, sidoo kale ay ku dadaalaan inaan sare loo qaadin qiimaha la kala siisto badeecada gaar ahaan cunnada aasaaska u ah nolosha bulshda iyo inay ku tarsamaan wax soo saarka gudaha si looga maarmo ku tiirsanaanta ...
Somaliya oo Laga Diiwaangeliyay Tiradii Ugu Badneyd oo COVID-19 ah
Wasaaradda caafimaadka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa xaqiijisay in ay soo kordheen 49 kiis oo cusub oo Covid19 ah, kuwaas oo dalka laga helay saacadihi ugu dambeeyay. Wasaaradda ayaa sheegtay in sidoo kale 6 ruux maanta ay cudurka karoona fayris ugu geeriyootay dalka, taas oo noqoneysa tiradii ugu badneed ee hal maalin dalka ugu geeriyoota Covid19. Tirada guud ee kiisaska cudurka ...
Khayre, Safiirrada Dalalka Iyo Wakiillada Beesha Caalamka Ka Hadlay Xakameynta COVID-19
Ra’iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, mudane Xasan Cali Khayre, safiirrada dalalka saaxiibka la ah Soomaaliya iyo wakiillada hey’adaha caalamiga ah ee dalka ku sugan oo yeeshay kulan dhanka mareegta Interneetka ayaa ka wada hadlay xaaladda dalku marayo, gaar ahaan Cudurka Safmarka ah ee COVID-19. Ra’iisul Wasaaraha ayaa mas’uuliyiinta kulanka qaybta ka ahaa ku war geliyay in dowladda Soomaaliya ay dooneyso ...
Waare oo Shaqadii ka Joojiyay Wasiiru Dowlaha Dastuurka Hirshabelle.
Madaxweyne Dowladd Gobaleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa Shaqo joojin kusameeyay Xildhibaan Saadaq Muqtaar oo ah Wasiiru Dowlaha Dastuurka Hirshabelle. Wasiirka Shaqada laga Joojiyay ayaa lagu eedeeyay in uu jabiyay awaamiirta maamulka ee la xiriirta ka hortaga Coronavirus.
Maamulka Gobolka Banaadir oo bilaabay Ololaha Muqdisho lagu buufinayo+Sawirro
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamud Maxamed (Cumar Filish) ayaa daahfuray ololihii ugu horeeyay ee lagu buufinaayo sunta ka hortaga faafinta cudurka Covid-19 oo si adag u saameeyay Caalamka. Guddoomiye Cumar Filish ayaa sheegay in ololahan lagu buufinayo uu yahay mid magaalada oo dhan laga sameyn doono, si loo dilo jeermiska cudurka Coronavirus. Booyada siday sunta ...
Faah-faahin:-Laba Ruux oo Lagu Dilay Magaaladda Muqdisho
Askari ka tirsan ciidamadda Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa xalay Degmadda Kaxda ee gobolka banaadir ku dilay Laba Wiil oo dhalinyaro ahaa. Labada wiil ee dhalinyarada ah ayaa dilkooda wuxuu yimid kadib markii waxyaabaha Maanka dooriya ay isku qabsadeen askari dowladda ka tirsanaa, waxaana la sheegay inuu rasaas ku furay iyagoo koox dhalinyaro ah. Sidoo kale askari ka tirsan Dowladda Soomaaliya ...
Qarax Khasaare u Geystay Raggii Aasayey oo Muqdisho Ka Dhacay+Sawirro
Faah-faahino dheeraad ah ayaa laga helayaa qarax miino oo xalay ka dhacay magaaladda muqdisho,iyadoo ragii aasayay ay waxyeelo kasoo gaartay. Qaraxaan ayaa ka dhacay wadada marta Isgoyska SOS oo inta badan ay isticmaalaan ciidamada Dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM. Saraakiil ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in qaraxa uu ku dhintay kii aasayay, islamarkaana waxyeelo daran ay soo gaartay labo ...
Dowladda oo Ka Hadashay Xaaladdii Ugu Dambeeyay ee COVID-19.
Wasiirka Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya, Marwo Fowziya Abiikar Nuur, ayaa maanta ka war bixisay xaaladdii ugu dambeeyay ee COVID-19. Marwo Fowziya Abiikar Nuur oo shir jaraa’id ku qabagtay xafiiska Ra’iisul Wasaaraha, ayaa sheegtay in dadaallada is-daba joogga ah ee dowlddu sameysay aawadeed lagu guuleestay qorshayaal badan oo qayb ka ahaa dadaallada lagu xakameynayo COVID-19. Wasiirka Caafimaadka iyo ...
Page 30 of 2,075« First...1020«2829303132	»	405060...Last »